ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ လူသိနည်းသောဖြစ်ရပ်(၁၀) ခု - Thutazone
By ThutammPosted on November 26, 2017
(၁) ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ရ/မရ ငြင်းခုံမှုများ
၂၀၁၅ ခု ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် နှစ် ၁၀၀ပြည့်ခဲ့သည့် လွတ်လပ်ရေး ဗိသုကာ အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ရ/မရနှင့် ပတ်သက်ပြီး ငြင်းခုံမှုများ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်။ ယင်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကိုယ်တိုင် ရေးသားခဲ့သော စာတွင်လည်း “ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် ၆ နှစ်ခွဲနေခဲ့၍ နိုင်ငံရေး စိတ်သန်မှုကြောင့် ကျောင်းစာများ မလေ့ကျက်သဖြင့် ဘီအေအတန်းအထိ အောင်ရုံသာ အောင်ခဲ့သည်”ဟု အတိအလင်း ဖော်ပြထားသည်။
“အောင်ဆန်းသည် အချိန်ပြည့် ကျောင်းသားနိုင်ငံရေး လုပ်နေသည့်ကြားမှ ၁၉၃၇ ခုနှစ် မတ်လတွင် ကျင်းပသော ဘီအေစာမေးပွဲကို အင်္ဂလိပ်စာပေ ခေတ်သစ် ရာဇ၀င်၊ နိုင်ငံရေး ဘာသာဗေဒများဖြင့် ချောမောစွာ အောင်မြင်သည်။၁၉၃၇-၃၈ ခုနှစ်တွင် အောင်ဆန်းသည် ကျောင်းသား နိုင်ငံရေး သာမက တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေး အတွက်ပါ ဆောင်ရွက်နေရကာ ဥပဒေ ပထမနှစ် စာမေးပွဲ ရှုံးလေသည်။ သူ၏ ပထမဦးဆုံးနှင့် နောက်ဆုံး ရှုံးခြင်းပေတည်း။ အောင်ဆန်းကား အောင်ထားသော ဘီအေဘွဲ့ကိုပင် ဘွဲ့နှင်းသဘင်၌ တက်မယူပေ။ (ဗိုလ်ချုပ်အစ်ကိုဖြစ်သူ ဦးအောင်သန်း ရေးသားခဲ့သည့် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ဘ၀ အောင်ဆန်း မှတ်တမ်းများမှ)
ထို့ကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရရှိရန် တက္ကသိုလ်ကျောင်း ပညာရေးအား စွန့်ခွာ၍ ကျောင်းထွက်ပြီး နိုင်ငံရေး လုပ်သည်ဆိုသော ပြောဆိုချက်၊ ရေးသားချက်များသည် မှားယွင်းကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
(၂) ဗိုလ်ချုပ်လူ တကယ် သတ်/မသတ်
ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေး၊ နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေး ကာလအတွင်း မြန်မာ့တပ်မတော်ကို တည်ထောင်ခဲ့သည့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် တော်လှန်ရေးအတွင်း လူတကယ် သတ်/မသတ် ငြင်းခုံပြောဆိုမှုများ ရှိခဲ့သည်။
ထိုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ “၁၉၄၅ ခု နိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းဝန်ချုပ်က ဗြိတိသျှ အစိုးရ မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းဝန်ထံ စာတစ်စောင် ရေးသား ပေးပို့သည့် စာတွင် ၁၉၄၂ ဂျပန်တပ်မတော်နှင့် မြန်မာ့ လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် မုတ္တမမှ သထုံသို့ ချီတက်လာစဉ် သထုံခရိုင် ပေါင်မြို့နယ် သဲဖြူကုန်းရွာ (သထုံမှ ၃၃ မိုင် အကွာ)တွင် ဘာဘူကြီး အဗ္ဗဒူရာရှစ်အား သထုံ ဘောလုံးကွင်း အတွင်း သတ်ဖြတ်မှု၌ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပါဝင် ပတ်သက်နေသည့် အတွက် တရားစွဲဆိုရန် အကြံပြုထားသည်”
ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကိုယ်တိုင် ဖဆပလအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ယူသော အချိန်၌ “သတင်းစုံ”ဂျာနယ် ကြေညာချက်ဆောင်းပါး “ကျွန်ုပ်၏ လိပ်ပြာကား အစဉ်သန့်ရှင်းလျက်”ဖြင့် အတိအလင်း ၀န်ခံထားပြီး ဖြစ်သည်။
ယင်းဖြစ်စဉ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လူသတ်မှု ကျူးလွန်သည်ကို ဘုရင်ခံ၏ ဆန္ဒအရ လွှတ်တော်တွင် ကိုယ်စားလှယ်များ အဖြစ် တာဝန်ယူနေသော သခင်ထွန်းအုပ်နှင့် သခင် ကျော်စိန်တို့က လိုအပ်လျှင် သက်သေလိုက်ပေးမည်ဟု ပြောဆိုပြီး ဗိုလ်ချုပ်ကို ထိုးနှက်ခဲ့သော်လည်း အင်္ဂလိပ်အစိုးရ မျှော်လင့်သလို ဗိုလ်ချုပ်သည် လူသတ်မှုဖြင့် ပြစ်ဒဏ်မကျခဲ့ပေ။ နောက်ပိုင်းတွင် သေပြီးသား အင်္ဂလိပ် စစ်သား အလောင်း ၃ လောင်းအား ခေါင်းဖြတ်ခဲ့ပြီး သူရဲကောင်း သဖွယ် ပြုမူခဲ့သည့် သခင်ထွန်းအုပ်၏ အဖြစ်အပျက်ကို သတင်းစာများက ထုတ်ဖော်ပြီး အရှက်ခွဲခဲ့သည်။
(၃) ဗိုလ်ချုပ် အင်္ဂလိပ်စကားပြော ကောင်း/မကောင်း
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် မကွေးတိုင်း နတ်မောက်မြို့နယ်တွင် မွေးဖွားခဲ့သည့် အတွက် အင်္ဂလိပ်စကား သင်ကြားပေးရန် ကျောင်းကောင်းကောင်း မရှိခဲ့ပေ။ အသက်ရှစ်နှစ်သား အရွယ်အထိ ကျောင်းမနေခဲ့ဘဲ နောက်မှသာ နတ်မောက်ရှိ ဒီပင်္ကရာကျောင်း ခေါ် ဦးသောဘိတကျောင်းသို့ တက်ရောက် ပညာသင်ကြားသည်။ ထိုကျောင်းသည် ဘုန်းကြီးကျောင်း ဖြစ်သော်လည်း အတန်းကျောင်း ဖြစ်သောကြောင့် လောကဓာတ် ကျောင်းဟု ခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည်။
ထို့နောက် ရေနံချောင်း အမျိုးသားကျောင်းမှ အောင်မြင်ပြီး တက္ကသိုလ် ရောက်သည့်အခါ တက္ကသိုလ် ကျောင်းဆောင် အမှုဆောင် ရွေးချယ်ပွဲတွင် အောင်ဆန်း၏ ဋ္ဌာန်ကရိုဏ်း မကျသော အင်္ဂလိပ် စကားကြောင့် ကျောင်းသားများ၏ လှောင်ပြောင်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ သို့သော် တက္ကသိုလ်တွင် ကျောင်းအုပ်ကြီး မစ္စတာ စလော့၏ ခွေးများကို ထိန်းကျောင်းရသော စကော့တလန် လူမျိုး ၀ီလီယံနှင့်အတူ အင်းယား ကန်ဘောင်တွင် မနက်တိုင်း လိုက်ပြီး လေ့ကျင့်ခဲ့သည့်အတွက် အောင်ဆန်းသည် အင်္ဂလိပ် တစ်ဦး နှင့်မခြား ပြောဆိုလာနိုင်သည်။
(၄)မအောင်မြင်သော အမွေ တောင်းခန်း
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင် ဖြစ်လာသော်လည်း စီးပွားရေး ကောင်းမွန်သောသူ မဟုတ်ပေ။ ဒေါ်ခင်ကြည်နှင့် အိမ်ထောင်ကျပြီးနောက် သားသမီးများ တစ်နှစ် တစ်ယောက် ထွန်းကားခဲ့သည်။ သားအကြီး နှစ်ဦးဖြစ်သော အောင်ဆန်းဦးနှင့် အောင်ဆန်းလင်းတို့ မွေးစဉ်က စိတ်မပူပန်သော ဗိုလ်ချုပ်သည် သမီးလေး အောင်ဆန်းစုကြည် မွေးဖွားလာသောအခါ သမီးလေး အတွက် စိတ်ပူပန်တတ်လာသည်။ ထို့ကြောင့် သမီးလေး အရွယ် ရောက်သောအခါ ရှင်ပြုနားသ လုပ်ရာတွင် ၀တ်ဆင်စရာ မရှိမည် စိုးသည့်အတွက် နတ်မောက်မြို့ရှိ မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်စုထံ သွားရောက်ပြီး သမီးအတွက် ရွှေနားတောင်းကို အမွေတောင်းခဲ့သည်။ မိခင် ဖြစ်သူကလည်း သူ့တွင် အောင်ဆန်း တစ်ဦးတည်း မွေးထားခြင်း မဟုတ်ဘဲ ကျန်သားသမီးများပါ ရှိနေသည့် အတွက် မျက်နှာလိုက်၍ အမွေမပေးနိုင်ကြောင်း ပြောဆိုသည့်အတွက် ဗိုလ်ချုပ်၏ အမွေတောင်းခန်းမှာ မအောင်မမြင်ဖြင့် စခန်းသိမ်းခဲ့ရသည်။
(၅) ဗိုလ်ချုပ် အငြိမ့်မင်း သမီးဖြင့် အငြိမ့်စင်ပေါ်တွင် ကပြခြင်း
၁၉၄၂ ခုနှစ်က တပ်မတော် အတွင်း အခမ်းအနားတစ်ခု ပြုလုပ်ပြီး ညပိုင်းတွင် တပ်မတော် အရာရှိများကို အငြိမ့်ဖြင့် ကပြ ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ ထိုအချိန်က ဗမာ့တပ်မတော်အား ဂျပန်ကို ပြန်လည် တော်လှန်ရန်အတွက် တိတ်တဆိတ် အစီအစဉ် ချမှတ်နေရချိန် ဖြစ်သည်။ ဧည့်ခံပွဲသို့ အစိုးရ အဓိပတိ ဒေါက်တာဘမော် အပါအ၀င် စစ်သေနာပတိ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းလည်း တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ဗမာ့တပ်မတော်၏ ထိပ်တန်းတပ်မှူးများ အပြင် နယ်မှ ရောက်နေသော စစ်ဗိုလ်များလည်း ရှိနေပြီး ဂျပန်နှင့် နီးစပ်နေသော ဒေါက်တာဘမော်ကို အမြင် မကြည်လင်သည့် အချိန် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အရက်မူးနေသော ဗိုလ်မြဟန် ဦးဆောင်ကာ အဓိပတိ ဒေါက်တာ ဘမော်အား အငြိမ့်မင်းသမီးဖြင့် သီချင်းတွဲဆိုရန် တောင်းဆိုကြသည်။ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဒေါက်တာဘမော်အား သိက္ခာချလို၍ ဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာ ဘမော်ကလည်း ငြင်းဆို၍ မဖြစ်သည့် အတွက် စင်ပေါ်တက်ပြီး ပြင်သစ်သီချင်း တစ်ပုဒ်ကို သီဆိုဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ သို့သော် အရက်မူးနေသော တပ်မှူးများက ဒေါက်တာဘမော်ကို ထပ်မံ တောင်းဆိုနေသည့် အတွက် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက တော်လှန်ရေး ကိစ္စအား မရိပ်မိစေရန် ဆူဆူအောင့်အောင့်ဖြင့် စင်ပေါ်တက်လာပြီး မင်းသမီး လက်ကိုဆွဲကာ အချိုးမကျသော ပုံစံဖြင့် တွဲဖက်ကပြခဲ့သည်။ ထိုအခါမှ အခမ်းအနားတွင် ရှိနေသောသူ အားလုံး ငြိမ်သက်သွားခဲ့သည်။
(၆) ဗိုလ်ချုပ် သတင်းစာ အဖတ်မှားခြင်း
တို့ဗမာ အစည်းအရုံးတွင် တစ်ရက်၌ သခင်အောင်ဆန်းသည် သတင်းစာ ဂျာနယ်များကို ဖတ်လျက်ရှိသည်။ သတင်းစာ တစ်စောင်ကို ဖတ်နေရင်း တောင်တွင်းကြီးတွင် မီးလောင်သည်ဟု ဖတ်ပြီး လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ဖြစ်သွားသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် တောင်တွင်းကြီးတွင် သခင် အောင်ဆန်း၏ ဆွေမျိုးများ ရှိနေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သတင်းစာကို ပစ်ချကာ တောင်တွင်းကြီးသို့ မီးဘေး သတင်းမေးရန် အလျင်စလို ထွက်ခွာသွားသည်။ တို့ဗမာ အစည်းအရုံးမှ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များက သတင်းစာကို ပြန်ဖတ်ကြည့်ရာ မီးလောင်သောမြို့သည် တောင်တွင်းကြီး မဟုတ်ဘဲ တောင်ကြီး ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရလေသည်။ ၃၊၄ရက် ကြာသောအခါ သခင် အောင်ဆန်းသည် တို့ဗမာ အစည်းအရုံးသို့ ပြန်ရောက်လာပြီး သတင်းစာ အဖတ်မှားပြီး တောင်တွင်းကြီး ရောက်ခဲ့သည်ဟု ပြုံးဖြဲဖြဲဖြင့် ဆိုရှာသည်။
(၇) တကသ ဥက္ကဋ္ဌအား ဆဲဆို ကြိမ်းမောင်းခြင်း
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် တပ်မတော်မှထွက်ပြီး ဖဆပလ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရရန် အားသွန်ခွန်စိုက် ဆောင်ရွက်နေချိန် ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်တွင် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်ရှိ ကျောင်းသားများနှင့် တကသ အဖွဲ့အစည်းများကလည်း ဖဆပလကို ၀ိုင်းဝန်း ထောက်ခံပံ့ပိုး နေချိန်ဖြစ်သည်။ သို့သော် တကသ ဥက္ကဋ္ဌ သူရိယ ဦးသန်းမောင် ခေါင်းဆောင်သော ကျောင်းသားများသည် ဖဆပလ အစိုးရအဖွဲ့ ကိုယ်စား ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းအား တွေ့ဆုံပြီး တောင်းဆိုချက် ၁၀ချက်ကို တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ဗိုလ်ချုပ်သည် နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရရန် အလုပ် ရှုပ်နေသည့် အတွက် ရုတ်တရက် ဒေါသထွက်သွားပြီး သူရိယ ဦးသန်းမောင်နှင့် ကျောင်းသားများကို ဆဲဆိုကြိမ်းမောင်းခဲ့သည်။ ထို့နောက် ကျောင်းသားများ တောင်းဆိုသော အချက်များအား ဖတ်ရှုပြီး ပတ်ကားဖောင်တိန်ဖြင့် ခြစ်ကာ “ဒါရမယ် ဒါရမယ် ဒါမရဘူး ဒါမရဘူး တော်တော် စောက်လုပ်ရှုပ်တဲ့ သန်းမောင် သွား…….ပြန်တော့”ဟု မောင်းထုတ် ခဲ့ဖူးကြောင်း သူရိယ ဦးသန်းမောင်မှ မကွယ်လွန်မီ အမှတ်တရ ပြောပြခဲ့ဖူးသည်။
(၈)ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးနှင့် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း
၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို ထိုအချိန်က ရှေ့နေချုပ် ဦးချန်ထွန်းမှ ရေးဆွဲခဲ့သည်။ ထိုဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေထဲတွင် နိုင်ငံတော်၏ ဘာသာအဖြစ် ဗုဒ္ဓဘာသာအား ထည့်သွင်းထားခြင်းကို ဒီးဒုတ်ဦးဘချို ဦးဆောင်ကာ ရေးဆွဲခဲ့သည်။ ထိုအချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ပင်လုံစာချုပ် ဖြစ်မြောက်ရေး အတွက် အရေးပါခဲ့သော ဦးဖေခင်က အကြီးအကျယ် ကန့်ကွက်ခဲ့၍ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကိုယ်တိုင် အစည်းအဝေး ခေါ်ယူခဲ့ရသည်။ ဗိုလ်ချုပ်က ဒီးဒုတ်ဦးဘချိုနှင့် ဦးချန်ထွန်းအား ဖြောင့်ဖျပြီး ပြင်ဆင်ပေးရန် ကြိုးစားရာ ဦးချန်ထွန်းကလည်း အလျော့မပေးဘဲ တင်းခံနေခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် ဗိုလ်ချုပ်က စိတ်မရှည်တော့ဘဲ “တချို့ဟာတွေက မှန်ပေမယ့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေထဲတော့ ထည့်စရာမလိုဘူးလို့ ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ ဥပမာ ဦးချန်ထွန်း ချေးမစားဘူးဆိုတာ လူတိုင်းသိတယ်။ သို့သော်လည်း ဦးချန်ထွန်း ချေးမစားပါလို့တော့ ထည့်သွင်းရေးသားဖို့ မသင့်တော်ဘူး”ဟုဆိုကာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ကိစ္စအား ဖြေရှင်းပေးခဲ့သည်။
(၉) မန္တလေးတွင် ပုဆိုးကျွတ်ကျခြင်း
နယ်ချဲ့ အစိုးရလက်ထက် အတွင်း ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသား သမဂ္ဂ ညီလာခံကို မန္တလေး၌ ကျင်းပခဲ့သည်။ ထိုညီလာခံသို့ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှု ခေါင်းဆောင် မစ္စတာနေရူးနှင့် သမီးဖြစ်သူ အင်ဒီယာ ဂန္ဒီတို့လည်း ရောက်ရှိနေသည်။ ထိုညီလာခံတွင် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ကိုအောင်ဆန်း မိန့်ခွန်း ပြောကြားနေစဉ် သူ၏ပုဆိုးမှာ အောက်သို့ တဖြည်းဖြည်း လျှောလျှောပြီး ကျလာရာ ကျွတ်တော့မည့် အခြေအနေသို့ ရောက်လာသည်။ သို့သော် မိန့်ခွန်းကို စိတ်ပါလက်ပါ ပြောကြားနေသည့် ကိုအောင်ဆန်းက သတိမထားမိသော်လည်း နားထောင်နေသည့် ပရိသတ်များမှာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြင့် စိတ်မသက်မသာ ဖြစ်နေသည်။ သို့သော် ကိုအောင်ဆန်း၏ ထူးခြားသော ဆဋ္ဌမ အာရုံအရ ကျွတ်လုဆဲဆဲ အခြေအနေတွင် ပုဆိုးကို ပြန်ဝတ်ကာ မိန့်ခွန်းကို ရှောရှောရှူရှူ ပြောသွားနိုင်ခဲ့သည်။
(၁၀) One Die, Nevermind
ဗမာ့ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ခေတ်တွင် ဘီဒီအေ အရာရှိများကို မင်္ဂလာဒုံရှိ ဗိုလ်သင်တန်းကျောင်းတွင် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသည်။ ထိုအချိန်က သင်တန်းဆရာ အများစုမှာ ဂျပန်များဖြစ်ပြီး နောင်တစ်ချိန်တွင် တပ်မတော်၏ တပ်မှူးကြီးများ ဖြစ်လာမည့် ဦးအောင်ရွှေ၊ ဦးကြည်မောင်၊ ဦးတင်ဦး၊ ဒေါက်တာမောင်မောင်တို့ အပါအ၀င် တပ်မတော် အရာရှိငယ်များ သင်တန်း တက်ရောက်လျက်ရှိသည်။ ထိုသင်တန်းတွင် ပြင်းထန်သော စစ်ပညာများကို သင်ကြားရသည့် သင်တန်းသားများမှာ အထူး ပင်ပန်းလျက်ရှိသည်။ သို့သော် သင်တန်း ဆရာများက သင်တန်းသားများကို “One Die, Nevermind. Two Die, Nevermind. Three Die, Nevermind. All Die, Nevermind ဟု ပြောကြားသည့်အတွက် အားလုံး မကျေမနပ် ဖြစ်သွားသည်။ နောက်မှ ထိုစကားကို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ပြောကြားခိုင်းခြင်း ဖြစ်ပြီး အရေအတွက်ထက် အရည်အချင်းကို တန်ဖိုးထားသော တပ်မတော် ဖြစ်စေရန် မျှော်လင့်ထားသောကြောင့် ပြောခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြမှသာ အရာရှိ သင်တန်းသားများ စိတ်ဆိုးပြေသွားကြသည်။
ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျး၏ လူသိနညျးသောဖွဈရပျ(၁၀) ခု (unicode)
(၁) ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျး တက်ကသိုလျမှ ဘှဲ့ရ/မရ ငွငျးခုံမှုမြား
၂၀၁၅ ခု ဖဖေျောဝါရီလ ၁၃ ရကျနတှေ့ငျ နှဈ ၁၀၀ပွညျ့ခဲ့သညျ့ လှတျလပျရေး ဗိသုကာ အမြိုးသား ခေါငျးဆောငျကွီး ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးသညျ တက်ကသိုလျမှ ဘှဲ့ရ/မရနှငျ့ ပတျသကျပွီး ငွငျးခုံမှုမြား ဖွဈပျေါလကျြရှိသညျ။ ယငျးကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျပွီး ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျး ကိုယျတိုငျ ရေးသားခဲ့သော စာတှငျလညျး “ရနျကုနျတက်ကသိုလျတှငျ ၆ နှဈခှဲနခေဲ့၍ နိုငျငံရေး စိတျသနျမှုကွောငျ့ ကြောငျးစာမြား မလကေ့ကျြသဖွငျ့ ဘီအအေတနျးအထိ အောငျရုံသာ အောငျခဲ့သညျ”ဟု အတိအလငျး ဖျောပွထားသညျ။
“အောငျဆနျးသညျ အခြိနျပွညျ့ ကြောငျးသားနိုငျငံရေး လုပျနသေညျ့ကွားမှ ၁၉၃၇ ခုနှဈ မတျလတှငျ ကငျြးပသော ဘီအစောမေးပှဲကို အင်ျဂလိပျစာပေ ခတျေသဈ ရာဇဝငျ၊ နိုငျငံရေး ဘာသာဗဒေမြားဖွငျ့ ခြောမောစှာ အောငျမွငျသညျ။၁၉၃၇-၃၈ ခုနှဈတှငျ အောငျဆနျးသညျ ကြောငျးသား နိုငျငံရေး သာမက တိုငျးပွညျလှတျလပျရေး အတှကျပါ ဆောငျရှကျနရေကာ ဥပဒေ ပထမနှဈ စာမေးပှဲ ရှုံးလသေညျ။ သူ၏ ပထမဦးဆုံးနှငျ့ နောကျဆုံး ရှုံးခွငျးပတေညျး။ အောငျဆနျးကား အောငျထားသော ဘီအဘှေဲ့ကိုပငျ ဘှဲ့နှငျးသဘငျ၌ တကျမယူပေ။ (ဗိုလျခြုပျအဈကိုဖွဈသူ ဦးအောငျသနျး ရေးသားခဲ့သညျ့ တက်ကသိုလျကြောငျးသား ဘ၀ အောငျဆနျး မှတျတမျးမြားမှ)
ထို့ကွောငျ့ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးသညျ မွနျမာနိုငျငံ လှတျလပျရေးရရှိရနျ တက်ကသိုလျကြောငျး ပညာရေးအား စှနျ့ခှာ၍ ကြောငျးထှကျပွီး နိုငျငံရေး လုပျသညျဆိုသော ပွောဆိုခကျြ၊ ရေးသားခကျြမြားသညျ မှားယှငျးကွောငျး တှရှေိ့ရသညျ။
(၂) ဗိုလျခြုပျလူ တကယျ သတျ/မသတျ
ဖကျဆဈတျောလှနျရေး၊ နယျခြဲ့ဆနျ့ကငျြရေး ကာလအတှငျး မွနျမာ့တပျမတျောကို တညျထောငျခဲ့သညျ့ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးသညျ တျောလှနျရေးအတှငျး လူတကယျ သတျ/မသတျ ငွငျးခုံပွောဆိုမှုမြား ရှိခဲ့သညျ။
ထိုကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ၍ “၁၉၄၅ ခု နိုဝငျဘာ ၁၄ ရကျတှငျ မွနျမာနိုငျငံ အတှငျးဝနျခြုပျက ဗွိတိသြှ အစိုးရ မွနျမာနိုငျငံ အတှငျးဝနျထံ စာတဈစောငျ ရေးသား ပေးပို့သညျ့ စာတှငျ ၁၉၄၂ ဂပြနျတပျမတျောနှငျ့ မွနျမာ့ လှတျလပျရေး တပျမတျော မုတ်တမမှ သထုံသို့ ခြီတကျလာစဉျ သထုံခရိုငျ ပေါငျမွို့နယျ သဲဖွူကုနျးရှာ (သထုံမှ ၃၃ မိုငျ အကှာ)တှငျ ဘာဘူကွီး အဗ်ဗဒူရာရှဈအား သထုံ ဘောလုံးကှငျး အတှငျး သတျဖွတျမှု၌ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျး ပါဝငျ ပတျသကျနသေညျ့ အတှကျ တရားစှဲဆိုရနျ အကွံပွုထားသညျ”
ဤကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ၍ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျး ကိုယျတိုငျ ဖဆပလအဖှဲ့ ဥက်ကဋ်ဌ တာဝနျယူသော အခြိနျ၌ “သတငျးစုံ”ဂြာနယျ ကွညောခကျြဆောငျးပါး “ကြှနျုပျ၏ လိပျပွာကား အစဉျသနျ့ရှငျးလကျြ”ဖွငျ့ အတိအလငျး ဝနျခံထားပွီး ဖွဈသညျ။
ယငျးဖွဈစဉျတှငျ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျး လူသတျမှု ကြူးလှနျသညျကို ဘုရငျခံ၏ ဆန်ဒအရ လှတျတျောတှငျ ကိုယျစားလှယျမြား အဖွဈ တာဝနျယူနသေော သခငျထှနျးအုပျနှငျ့ သခငျ ကြျောစိနျတို့က လိုအပျလြှငျ သကျသလေိုကျပေးမညျဟု ပွောဆိုပွီး ဗိုလျခြုပျကို ထိုးနှကျခဲ့သျောလညျး အင်ျဂလိပျအစိုးရ မြှျောလငျ့သလို ဗိုလျခြုပျသညျ လူသတျမှုဖွငျ့ ပွဈဒဏျမကခြဲ့ပေ။ နောကျပိုငျးတှငျ သပွေီးသား အင်ျဂလိပျ စဈသား အလောငျး ၃ လောငျးအား ခေါငျးဖွတျခဲ့ပွီး သူရဲကောငျး သဖှယျ ပွုမူခဲ့သညျ့ သခငျထှနျးအုပျ၏ အဖွဈအပကျြကို သတငျးစာမြားက ထုတျဖျောပွီး အရှကျခှဲခဲ့သညျ။
(၃) ဗိုလျခြုပျ အင်ျဂလိပျစကားပွော ကောငျး/မကောငျး
ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးသညျ မကှေးတိုငျး နတျမောကျမွို့နယျတှငျ မှေးဖှားခဲ့သညျ့ အတှကျ အင်ျဂလိပျစကား သငျကွားပေးရနျ ကြောငျးကောငျးကောငျး မရှိခဲ့ပေ။ အသကျရှဈနှဈသား အရှယျအထိ ကြောငျးမနခေဲ့ဘဲ နောကျမှသာ နတျမောကျရှိ ဒီပင်ျကရာကြောငျး ချေါ ဦးသောဘိတကြောငျးသို့ တကျရောကျ ပညာသငျကွားသညျ။ ထိုကြောငျးသညျ ဘုနျးကွီးကြောငျး ဖွဈသျောလညျး အတနျးကြောငျး ဖွဈသောကွောငျ့ လောကဓာတျ ကြောငျးဟု ချေါဝျေါခဲ့သညျ။
ထို့နောကျ ရနေံခြောငျး အမြိုးသားကြောငျးမှ အောငျမွငျပွီး တက်ကသိုလျ ရောကျသညျ့အခါ တက်ကသိုလျ ကြောငျးဆောငျ အမှုဆောငျ ရှေးခယျြပှဲတှငျ အောငျဆနျး၏ ဋ်ဌာနျကရိုဏျး မကသြော အင်ျဂလိပျ စကားကွောငျ့ ကြောငျးသားမြား၏ လှောငျပွောငျခွငျး ခံခဲ့ရသညျ။ သို့သျော တက်ကသိုလျတှငျ ကြောငျးအုပျကွီး မစ်စတာ စလော့၏ ခှေးမြားကို ထိနျးကြောငျးရသော စကော့တလနျ လူမြိုး ဝီလီယံနှငျ့အတူ အငျးယား ကနျဘောငျတှငျ မနကျတိုငျး လိုကျပွီး လကေ့ငျြ့ခဲ့သညျ့အတှကျ အောငျဆနျးသညျ အင်ျဂလိပျ တဈဦး နှငျ့မခွား ပွောဆိုလာနိုငျသညျ။
(၄)မအောငျမွငျသော အမှေ တောငျးခနျး
ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးသညျ တိုငျးပွညျခေါငျးဆောငျ ဖွဈလာသျောလညျး စီးပှားရေး ကောငျးမှနျသောသူ မဟုတျပေ။ ဒျေါခငျကွညျနှငျ့ အိမျထောငျကပြွီးနောကျ သားသမီးမြား တဈနှဈ တဈယောကျ ထှနျးကားခဲ့သညျ။ သားအကွီး နှဈဦးဖွဈသော အောငျဆနျးဦးနှငျ့ အောငျဆနျးလငျးတို့ မှေးစဉျက စိတျမပူပနျသော ဗိုလျခြုပျသညျ သမီးလေး အောငျဆနျးစုကွညျ မှေးဖှားလာသောအခါ သမီးလေး အတှကျ စိတျပူပနျတတျလာသညျ။ ထို့ကွောငျ့ သမီးလေး အရှယျ ရောကျသောအခါ ရှငျပွုနားသ လုပျရာတှငျ ဝတျဆငျစရာ မရှိမညျ စိုးသညျ့အတှကျ နတျမောကျမွို့ရှိ မိခငျဖွဈသူ ဒျေါစုထံ သှားရောကျပွီး သမီးအတှကျ ရှနေားတောငျးကို အမှတေောငျးခဲ့သညျ။ မိခငျ ဖွဈသူကလညျး သူ့တှငျ အောငျဆနျး တဈဦးတညျး မှေးထားခွငျး မဟုတျဘဲ ကနျြသားသမီးမြားပါ ရှိနသေညျ့ အတှကျ မကျြနှာလိုကျ၍ အမှမေပေးနိုငျကွောငျး ပွောဆိုသညျ့အတှကျ ဗိုလျခြုပျ၏ အမှတေောငျးခနျးမှာ မအောငျမမွငျဖွငျ့ စခနျးသိမျးခဲ့ရသညျ။
(၅) ဗိုလျခြုပျ အငွိမျ့မငျး သမီးဖွငျ့ အငွိမျ့စငျပျေါတှငျ ကပွခွငျး
၁၉၄၂ ခုနှဈက တပျမတျော အတှငျး အခမျးအနားတဈခု ပွုလုပျပွီး ညပိုငျးတှငျ တပျမတျော အရာရှိမြားကို အငွိမျ့ဖွငျ့ ကပွ ဖြျောဖွခေဲ့သညျ။ ထိုအခြိနျက ဗမာ့တပျမတျောအား ဂပြနျကို ပွနျလညျ တျောလှနျရနျအတှကျ တိတျတဆိတျ အစီအစဉျ ခမြှတျနရေခြိနျ ဖွဈသညျ။ ဧညျ့ခံပှဲသို့ အစိုးရ အဓိပတိ ဒေါကျတာဘမျော အပါအဝငျ စဈသနောပတိ ဗိုလျခြုပျ အောငျဆနျးလညျး တကျရောကျခဲ့သညျ။ ဗမာ့တပျမတျော၏ ထိပျတနျးတပျမှူးမြား အပွငျ နယျမှ ရောကျနသေော စဈဗိုလျမြားလညျး ရှိနပွေီး ဂပြနျနှငျ့ နီးစပျနသေော ဒေါကျတာဘမျောကို အမွငျ မကွညျလငျသညျ့ အခြိနျ ဖွဈသညျ။ ထို့ကွောငျ့ အရကျမူးနသေော ဗိုလျမွဟနျ ဦးဆောငျကာ အဓိပတိ ဒေါကျတာ ဘမျောအား အငွိမျ့မငျးသမီးဖွငျ့ သီခငျြးတှဲဆိုရနျ တောငျးဆိုကွသညျ။ အဓိက ရညျရှယျခကျြမှာ ဒေါကျတာဘမျောအား သိက်ခာခလြို၍ ဖွဈသညျ။ ဒေါကျတာ ဘမျောကလညျး ငွငျးဆို၍ မဖွဈသညျ့ အတှကျ စငျပျေါတကျပွီး ပွငျသဈသီခငျြး တဈပုဒျကို သီဆိုဖြျောဖွခေဲ့သညျ။ သို့သျော အရကျမူးနသေော တပျမှူးမြားက ဒေါကျတာဘမျောကို ထပျမံ တောငျးဆိုနသေညျ့ အတှကျ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးက တျောလှနျရေး ကိစ်စအား မရိပျမိစရေနျ ဆူဆူအောငျ့အောငျ့ဖွငျ့ စငျပျေါတကျလာပွီး မငျးသမီး လကျကိုဆှဲကာ အခြိုးမကသြော ပုံစံဖွငျ့ တှဲဖကျကပွခဲ့သညျ။ ထိုအခါမှ အခမျးအနားတှငျ ရှိနသေောသူ အားလုံး ငွိမျသကျသှားခဲ့သညျ။
(၆) ဗိုလျခြုပျ သတငျးစာ အဖတျမှားခွငျး
တို့ဗမာ အစညျးအရုံးတှငျ တဈရကျ၌ သခငျအောငျဆနျးသညျ သတငျးစာ ဂြာနယျမြားကို ဖတျလကျြရှိသညျ။ သတငျးစာ တဈစောငျကို ဖတျနရေငျး တောငျတှငျးကွီးတှငျ မီးလောငျသညျဟု ဖတျပွီး လှုပျလှုပျရှားရှား ဖွဈသှားသညျ။ အဘယျ့ကွောငျ့ဆိုသျော တောငျတှငျးကွီးတှငျ သခငျ အောငျဆနျး၏ ဆှမြေိုးမြား ရှိနသေောကွောငျ့ ဖွဈသညျ။ ထို့ကွောငျ့ သတငျးစာကို ပဈခကြာ တောငျတှငျးကွီးသို့ မီးဘေး သတငျးမေးရနျ အလငျြစလို ထှကျခှာသှားသညျ။ တို့ဗမာ အစညျးအရုံးမှ လုပျဖျောကိုငျဘကျမြားက သတငျးစာကို ပွနျဖတျကွညျ့ရာ မီးလောငျသောမွို့သညျ တောငျတှငျးကွီး မဟုတျဘဲ တောငျကွီး ဖွဈနသေညျကို တှရေ့လသေညျ။ ၃၊၄ရကျ ကွာသောအခါ သခငျ အောငျဆနျးသညျ တို့ဗမာ အစညျးအရုံးသို့ ပွနျရောကျလာပွီး သတငျးစာ အဖတျမှားပွီး တောငျတှငျးကွီး ရောကျခဲ့သညျဟု ပွုံးဖွဲဖွဲဖွငျ့ ဆိုရှာသညျ။
(၇) တကသ ဥက်ကဋ်ဌအား ဆဲဆို ကွိမျးမောငျးခွငျး
ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးသညျ တပျမတျောမှထှကျပွီး ဖဆပလ ဥက်ကဋ်ဌအဖွဈ မွနျမာနိုငျငံ လှတျလပျရေးရရနျ အားသှနျခှနျစိုကျ ဆောငျရှကျနခြေိနျ ဖွဈသညျ။ ထိုအခြိနျတှငျ ရနျကုနျ တက်ကသိုလျရှိ ကြောငျးသားမြားနှငျ့ တကသ အဖှဲ့အစညျးမြားကလညျး ဖဆပလကို ဝိုငျးဝနျး ထောကျခံပံ့ပိုး နခြေိနျဖွဈသညျ။ သို့သျော တကသ ဥက်ကဋ်ဌ သူရိယ ဦးသနျးမောငျ ခေါငျးဆောငျသော ကြောငျးသားမြားသညျ ဖဆပလ အစိုးရအဖှဲ့ ကိုယျစား ဗိုလျခြုပျ အောငျဆနျးအား တှဆေုံ့ပွီး တောငျးဆိုခကျြ ၁ဝခကျြကို တောငျးဆိုခဲ့သညျ။ ဗိုလျခြုပျသညျ နိုငျငံလှတျလပျရေးရရနျ အလုပျ ရှုပျနသေညျ့ အတှကျ ရုတျတရကျ ဒေါသထှကျသှားပွီး သူရိယ ဦးသနျးမောငျနှငျ့ ကြောငျးသားမြားကို ဆဲဆိုကွိမျးမောငျးခဲ့သညျ။ ထို့နောကျ ကြောငျးသားမြား တောငျးဆိုသော အခကျြမြားအား ဖတျရှုပွီး ပတျကားဖောငျတိနျဖွငျ့ ခွဈကာ “ဒါရမယျ ဒါရမယျ ဒါမရဘူး ဒါမရဘူး တျောတျော စောကျလုပျရှုပျတဲ့ သနျးမောငျ သှား…….ပွနျတော့”ဟု မောငျးထုတျ ခဲ့ဖူးကွောငျး သူရိယ ဦးသနျးမောငျမှ မကှယျလှနျမီ အမှတျတရ ပွောပွခဲ့ဖူးသညျ။
(၈)ဖှဲ့စညျးပုံ အခွခေံ ဥပဒေ ပွငျဆငျရေးနှငျ့ ဗိုလျခြုပျ အောငျဆနျး
၁၉၄၇ ခုနှဈ ဖှဲ့စညျးပုံ အခွခေံ ဥပဒကေို ထိုအခြိနျက ရှနေ့ခြေုပျ ဦးခနျြထှနျးမှ ရေးဆှဲခဲ့သညျ။ ထိုဖှဲ့စညျးပုံ အခွခေံ ဥပဒထေဲတှငျ နိုငျငံတျော၏ ဘာသာအဖွဈ ဗုဒ်ဓဘာသာအား ထညျ့သှငျးထားခွငျးကို ဒီးဒုတျဦးဘခြို ဦးဆောငျကာ ရေးဆှဲခဲ့သညျ။ ထိုအခကျြနှငျ့ ပတျသကျ၍ ပငျလုံစာခြုပျ ဖွဈမွောကျရေး အတှကျ အရေးပါခဲ့သော ဦးဖခေငျက အကွီးအကယျြ ကနျ့ကှကျခဲ့၍ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျး ကိုယျတိုငျ အစညျးအဝေး ချေါယူခဲ့ရသညျ။ ဗိုလျခြုပျက ဒီးဒုတျဦးဘခြိုနှငျ့ ဦးခနျြထှနျးအား ဖွောငျ့ဖပြွီး ပွငျဆငျပေးရနျ ကွိုးစားရာ ဦးခနျြထှနျးကလညျး အလြော့မပေးဘဲ တငျးခံနခေဲ့သညျ။ ထိုအခြိနျတှငျ ဗိုလျခြုပျက စိတျမရှညျတော့ဘဲ “တခြို့ဟာတှကေ မှနျပမေယျ့ ဖှဲ့စညျးပုံ အခွခေံ ဥပဒထေဲတော့ ထညျ့စရာမလိုဘူးလို့ ကြှနျတျောယူဆတယျ။ ဥပမာ ဦးခနျြထှနျး ခြေးမစားဘူးဆိုတာ လူတိုငျးသိတယျ။ သို့သျောလညျး ဦးခနျြထှနျး ခြေးမစားပါလို့တော့ ထညျ့သှငျးရေးသားဖို့ မသငျ့တျောဘူး”ဟုဆိုကာ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒေ ကိစ်စအား ဖွရှေငျးပေးခဲ့သညျ။
(၉) မန်တလေးတှငျ ပုဆိုးကြှတျကခြွငျး
နယျခြဲ့ အစိုးရလကျထကျ အတှငျး ဗမာနိုငျငံလုံးဆိုငျရာ ကြောငျးသား သမဂ်ဂ ညီလာခံကို မန်တလေး၌ ကငျြးပခဲ့သညျ။ ထိုညီလာခံသို့ အိန်ဒိယနိုငျငံမှ လှတျလပျရေး ကွိုးပမျးမှု ခေါငျးဆောငျ မစ်စတာနရေူးနှငျ့ သမီးဖွဈသူ အငျဒီယာ ဂန်ဒီတို့လညျး ရောကျရှိနသေညျ။ ထိုညီလာခံတှငျ ကြောငျးသား ခေါငျးဆောငျ ကိုအောငျဆနျး မိနျ့ခှနျး ပွောကွားနစေဉျ သူ၏ပုဆိုးမှာ အောကျသို့ တဖွညျးဖွညျး လြှောလြှောပွီး ကလြာရာ ကြှတျတော့မညျ့ အခွအေနသေို့ ရောကျလာသညျ။ သို့သျော မိနျ့ခှနျးကို စိတျပါလကျပါ ပွောကွားနသေညျ့ ကိုအောငျဆနျးက သတိမထားမိသျောလညျး နားထောငျနသေညျ့ ပရိသတျမြားမှာ စိုးရိမျပူပနျမှုဖွငျ့ စိတျမသကျမသာ ဖွဈနသေညျ။ သို့သျော ကိုအောငျဆနျး၏ ထူးခွားသော ဆဋ်ဌမ အာရုံအရ ကြှတျလုဆဲဆဲ အခွအေနတှေငျ ပုဆိုးကို ပွနျဝတျကာ မိနျ့ခှနျးကို ရှောရှောရှူရှူ ပွောသှားနိုငျခဲ့သညျ။
ဗမာ့ တပျမတျော ကာကှယျရေး ခတျေတှငျ ဘီဒီအေ အရာရှိမြားကို မင်ျဂလာဒုံရှိ ဗိုလျသငျတနျးကြောငျးတှငျ လကေ့ငျြ့သငျကွားပေးသညျ။ ထိုအခြိနျက သငျတနျးဆရာ အမြားစုမှာ ဂပြနျမြားဖွဈပွီး နောငျတဈခြိနျတှငျ တပျမတျော၏ တပျမှူးကွီးမြား ဖွဈလာမညျ့ ဦးအောငျရှေ၊ ဦးကွညျမောငျ၊ ဦးတငျဦး၊ ဒေါကျတာမောငျမောငျတို့ အပါအဝငျ တပျမတျော အရာရှိငယျမြား သငျတနျး တကျရောကျလကျြရှိသညျ။ ထိုသငျတနျးတှငျ ပွငျးထနျသော စဈပညာမြားကို သငျကွားရသညျ့ သငျတနျးသားမြားမှာ အထူး ပငျပနျးလကျြရှိသညျ။ သို့သျော သငျတနျး ဆရာမြားက သငျတနျးသားမြားကို “One Die, Nevermind. Two Die, Nevermind. Three Die, Nevermind. All Die, Nevermind ဟု ပွောကွားသညျ့အတှကျ အားလုံး မကမြေနပျ ဖွဈသှားသညျ။ နောကျမှ ထိုစကားကို ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးက ပွောကွားခိုငျးခွငျး ဖွဈပွီး အရအေတှကျထကျ အရညျအခငျြးကို တနျဖိုးထားသော တပျမတျော ဖွဈစရေနျ မြှျောလငျ့ထားသောကွောငျ့ ပွောခွငျးဖွဈကွောငျး ရှငျးပွမှသာ အရာရှိ သငျတနျးသားမြား စိတျဆိုးပွသှေားကွသညျ။
Previous post မင်းတုန်းမင်းကြီးရဲ့ မွေးစားသား ရစ်ပလေ ရဲ့ စွမ်းဆောင်ချက်များ (သို့) ဟံသာဝတီပုံနှိပ်တိုက်ကြီးကို စတင်တည်ထောင်သူ
Next post ချီးမွမ်း သုံးမိနစ်, ကဲ့ရဲ့သုံးမိနစ်